Wararka Maanta: Khamiis, Jun 17, 2021-Madaxweynaha Somaliland oo qaabilay xubnaha golaha deegaanka cusub ee Hargaysa
Wararka Maanta- Khamiis, Jun 17, 2021
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa kulan duco iyo dardaaran ah la yeeshay 17 xubnood ee dhawaan loo doortay golaha deegaanka ee Hargaysa.
Xubnaha golaha deegaanka Hargaysa ayaa waxa hogaaminayay mayorka iyo mayor ku xigeenka cusub ee maanta la doortay.
Madaxweyne Biixi ayaa hambalyeeyay xubaha cusub ee golaha deegaanka Hargaysa iyo mayorka iyo mayor ku xigeenka cusub ee maanta la doortay.
Madaxweynaha ayaa sidookale xubnaha ku bogaadiyay isku tanaasulka iyo isku duubnida.
Xubnaha cusub ee golaha deegaanka Hargaysa ayaa maanta mayor u caleemo saray Cabdikariin Axmed Mooge halka mayor ku xigeena ay u doorteen Khadar Axmed Cumar.
6/17/2021 10:14 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Somaliland ay waraaqo u dirtay caalamka si loo iib geeyo doorashooyinkii qabsoomay.
Golaha degaanka degmada Xuddun oo doortay gudoomiye cusub iyo golaha degaanka ee Laascaanood oo la dhaariyey
6/17/2021 9:15 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Golaha degaanka degmada Xuddun oo si buuxda loo ansixiyey ayaa doortay gudoomiye iyo ku xigeen kadib markii ay kulankoodii u horeeyey ku yeesheen magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Madaxweynaha Galmudug oo soo gudbiyay liiska xubnaha guddiyada doorashada ee laga sugaayay
6/17/2021 6:49 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa soo gudbiyay liiska xubnaha guddiyada doorashada heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed ee laga sugaayay inuu soo gudbiyo.
6/17/2021 6:13 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Xubnaha cusub ee golaha deegaanka Hargaysa, ayaa Cabdikariin Axmed Mooge u doortay mayorka cusub ee Hargaysa, halka Khadar Axmed Cumar loo doortay mayor ku xigeen.
Dowlada Norway oo shaacisay iney dib u fureyso Safaaradeedii magaalada Muqdisho
6/17/2021 5:35 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee dowlada Soomaaliya Balal Maxamed Cismaan ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Safiirka wadanka Norway u fadhiya Soomaaliya Elin Bergithe Rognlie, kuwaas oo kawada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee labada wadan.
6/17/2021 5:30 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isla meel dhigay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo dib usoo celinta xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada dowladood.
Xukuumadda oo shaacisay wadahadal khadka Taleefanka ku dhexmaray Rooble iyo Qoorqoor
6/17/2021 1:26 AM EST
Khamiis, Juun, 17, 2021 (HOL) - Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay iney rajo wanaagsan ka qabto inuu si deg deg ah kusoo gudbiyo madaxweynaha maamulka Galmudug liiska guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug.
Galmudug president appoints four members to elections and dispute resolution teams -HOL
6/17/2021 10:15 AM EST
DHUSAMAREB (HOL) - Galmudug state president Ahmed Qoorqoor has presented a list of four individuals to serve in the state indirect elections committee to the Office of the Prime Minister.
African Covid patients 'dying from lack of oxygen' -BBC
6/17/2021 8:09 AM EST
Kenya-Somalia Relations: Foreign Affairs Ministers Agree To Expedite Reopening Process -The Degital Standard
6/17/2021 8:00 AM EST
Doctors 'killed' Maradona via negligence — Nurse's lawyer -AFP
6/17/2021 2:30 AM EST
Negotiations ongoing in IS terror case -Australian Associated Press
6/17/2021 2:16 AM EST
6/17/2021 2:12 AM EST
Taiwan to send medical team to Somaliland -Focus Taiwan
6/17/2021 2:08 AM EST
Taiwan will dispatch a medical mission to the self-governing African territory of Somaliland, the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) said Wednesday in a statement, without providing a timeline for the mission.